Ka soo horjeedka goobta eOS Miyaynu horey u heli doonnaa nooc deggan? | Laga soo bilaabo Linux
Waan helay ilaa goobta eOS (aka ElementaryOS) waxaanan arkaa mid fudud oo qurux badan (si kale ma noqon karto) miisaanka noo sheegaya in ay laba maalmood uun hadhay. Laakiin laba maalmood maxaa?
Waxaan u maleynayaa sii deynta nooca xasilloon ee eOS, wax ay isticmaaleyaashaadu sugayeen muddo dheer, waqti dheer.
Waan jeclahay muuqaalka eOSMa diidi doono, laakiin way igu adag tahay inaan baxo KDE. Markaan ka fekero eOS Laba astaamood ayaa maskaxda ku soo dhaca: Fudud oo Qurux badan. Waxaa laga yaabaa inay tahay sida ay u fududahay, qodob kale oo iga hor istaagaya isticmaalka distoorkan, laakiin haye! hadda waxaan marwalba kugula talinayaa isticmaaleyaasha cusub, kor Ubuntu o linuxmint.
Waxaan hayaa nooca Beta 2 xasuusta flash-ka iyo waqti ka waqti waxaan bilaabayaa inaan ku ciyaaro. Laga soo bilaabo xusuusta dhaqanku waa "si caddaalad ah" mid deggan. Waxaan dhihi karaa tan anigoo tixgelinaya inaanan cusbooneysiin adeegsiga PPA-yada qeybinta, marka khaladaadka qaarkood ee muuqday waxaan u maleynayaa in horey loo xaliyay.
Iyo sidoo kale, in la dilo rabitaanka, maxaa yeelay xalka ugu fiican ee aan helay ayaa ah inaan ka tago tayda KDE aad u eg:
Waan cusbooneysiiyey boostada. Taariikh khaldan ayaan ku haystay laptop-ka. Laba maalmood ayaa hadhay
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Ka soo horjeedka goobta eOS Miyaynu horey u heli doonnaa nooc deggan?
"Xasilloon" Waxaan u maleynayaa in qaar badan, aan ku burburay markaan rakibo darawalka Nvidia ... Waxaan mar walba ku idhaahdaa weligood maahan inay ku boodaan distoorka laakiin kaliya waxay naftooda u hureen horumarinta jawigooda desktop.
Waxaan marwalba ka fikiri jiray in wiilasha Elementary aysan ahayn inay qaataan qaybsi gaar ah, laakiin ay sii daayaan xirmooyinkooda dhamaan. Si kale haddii loo dhigo, nidaamka deegaanka ee aasaasiga ahi wuxuu noqon karaa sida hal Degaan oo kale.
Taasi runtii way ka shaqeyn lahayd wax badan.
Haa, sidoo kale waxaan u maleynayaa inay isku mid yihiin, in kasta oo astaamaha iyo waxyaabahaas haddii ay yihiin kombuyuutarrada kale, waxaan aad u doorbidi lahaa inay horumariyaan desktop kale marka loo eego kuwa kale ee loo yaqaan 'distro' kale, laakiin ugu dambeyn, aan aragno sida
Wax badan ayaad weydiinaysaa Elav.
Elav, waxaad rabtaa doofaarka, doofaarrada, corral iyo lo'da.
Shaqo aad u badan oo wanaagsan oo ka timaadda carruurtan Elementary, koofiyadaydu way u furan tahay iyaga.
uff waxaan moodayay inay tahay mida kaliya ee kudhacday darawalka nvidia, way i xanuunaysaa runtii waan jeclaaday naqshadeeda, hada waxaan isticmaalaa kubuntu iyo puff kde ayaa igu haysata abaalmarinteeda: 3
Waxay i siisaa dhibaatooyin ka yar kan Ubuntu iyo Linux MInt, waa ka fudud yahay oo aad u deggan yahay sidoo kale waa beta, betaaaaa. Waa mid xasiloon, xaqiiqda ah inaad jabisay darawallada macnaheedu maahan inay dhammaantood halkaas joogeen.
Laakiin haye, waa uun fikirkaaga ka dhanka ah aqlabiyadda oo leh waa xasilloon tahay oo way fiicantahay inay u boodaan meel distro ah.
Waxay ila tahay inay fikrad fiican ahayd, waqtigan xaadirka ah waa dawada aan isticmaalo oo waan jeclahay waana hubaa in badankooduna iyaguna jecel yihiin.
2 maalmood 10 saacadood 55 daqiiqo ...
Salaan! Miiskaaga ayaa aad u qabow! Ma ii gudbin kartaa dulucda astaanta ee aad isticmaasho? Mahadsanid!!
Ku jawaab raul_19
Waxaad kala soo bixi kartaa cinwaanka boostadan. 😉
Adiga oo kugu mahadsan waxaan sugi doonaa bilowga xasilloonida eOS.
Waxaa jira hal shay oo aan aniga ii kordhineynin, sidee tahay adiga iyo aniga oo labo maalmood naga harsantahay? xD
Waxay noqon doontaa sababta farqiga waqtiga. Wax fikrad ah maleh, waa inaad hubisaa saacadda nidaamka 😀
Hagaag, waxaan haystaa 3 maalmood LOl! waxbaa qaldan xD.
Merde !! Dabcan, waxaan dhigay taariikhda 9-ka Ogos hahaha .. Xun
Haddii ay xasillooni ku soo baxdo, waxaan isku dayi karaa inaan arko sida aan xaaladdaydu tahay
Waxaan isticmaalayay bilo. Waxaan ku guuleystey inaan walaalkay ka wareejiyo daaqadaha una wareego linux mahadsanidiisa dugsiga hoose. Si shaqsi ah ayay aniga shaqsiyan aniga iila shaqaysaa 🙂
Desktop Vicky waa mid aad u fiican, haddii ay soo baxdo laba ama saddex maalmood gudahood sida ku cad miiska, waxaan ku tijaabin doonaa kumbuyuutarkeyga kumbuyuutarka.
Miis aad u fiican oo Vicky ah
Waa hargab aad u wanaagsan, waxaan sugayaa bilaabitaankeeda si aan u tijaabiyo
Cadaadis wanaagsan, inkasta oo ay umuuqato mid u eg Debian 1.0 marka loo eego wareegga horumarkiisa (3 sano jir).
http://www.youtube.com/watch?v=TcJ-wNmazHQ Maxay kula tahay XD
Hagaag waligey kuma fikirin inaan ka tago KDE, peeeeero, waxaa dhacday in wax walboo sifiican usocdaan waana caajisey, kadib dugsiga hoose ayaa imaaday oo aan fiiqay, hada waxaad igu arkeysaa anigoo kamid ah kuwa raacsan !!
Waxay umuuqataa mid wanaagsan, marhore ayaan arkay xoogaa qabashada waxaanan arkaa in distoorka sifiican loo gaadhay. Hadda waxaan ku jiraa Fedora 19 oo leh desktop-ka Xfce, waxaan hubaal ku tijaabin doonaa dusha desktop-ka. Farxad
Ujeedkeygu maahan inaan spam, kaliya si aan u daawado safar qabasho. Farxad
Dhibaatada ka jirta eOS iyo wixii la mid ah ayaa ah inay tahay mid ku saleysan meerto isla markaana keydkeeda ay ku buuxaan codsiyo hore.
Waa inay qaataan dhaq dhaqaaqa Chakra, Manjaro, Sabayon?, Aptosid, KdeOS, Semplice iyo wixii la mid ah sida ugu dhakhsaha badan ...
Waan tijaabinayay tan iyo xarafyadii ugu horreeyay laakiin tan distoorku iima ekaanayo oo keliya: - /
Taasi hadday, quruxsan tahay iyada kaligeed.
Dugsiga hoose ee qaaliga ah Watson
4:29 am, eaaa !!!
(Intee in leeg ayay ahayd illaa Ubuntu mar dambe shaki nagu jiro!?)
Si aad u soo dejiso ayaa loo yiri
Waqti fiican ayaan ku haystaa la ciyaarista 'distro' runtiina waa mid aad u wanaagsan, waan xiraa, wax dhib ahna kuma qabo darawalka nvidia sida ay kor ku sheegaan xD
Dugsiga Hoose OS Stable waa soo baxay.
Iyadu waa quruxsan tahay oo dhan laakiin uma muuqato wax soo saar aniga, laakiin markaan arko fiidiyow xayeysiis ah Waad u sheegi kartaa inay doonayaan inay soo jiitaan Maqueros-ka adduunka Linux.
Waa salaaman tahay, nasiib ayaan u helay inaan ku tijaabiyo Netbook, waa nal, deg deg iyo hawl qabad loogu talagalay isticmaalka guriga. Muuqal, filim, muusig, iyo shaqo kale. Waa wax fantastik ah laakiin aan aad loo habeyn karin (qeyb ahaan macquul), laakiin aakhirka kooxdan shaqo fiican ayey qabteen.
Xisaabinta daruuraha ... mise daruuraha mugdiga ah?